भारतका सबै योजना असफल भयो, ओली सरकार नै टिकाउने नेकपाको निर्णय – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/भारतका सबै योजना असफल भयो, ओली सरकार नै टिकाउने नेकपाको निर्णय
काठमाडौं । मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा अन्तत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी ओली नै अडिनु हुने भएको छ । नेकपाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै टिकाउने निर्णय गरेको छ ।
नेकपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि बसेको सचिवालय बैठकले अहिलेको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले घुमाउरो पारामा ओली सरकार नै टिक्ने प्रष्ट्याउनु भयो ।
‘ पार्टीमा उठेको विभिन्न विषयमा छलफल भयो’ , प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग भन्नुभयो ‘जनादेश अनुसार नै सरकार संचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
‘बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पद छोडनु पर्ने कुरा उठ्यो कि उठेन ? उहाँको राजीनामाबारे के भयो ?’ भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञाषाको प्रतिवाद गर्दै उहाँँले भन्नुभयो, ‘कसले कहाँ माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा ? बाहिर कसले कहाँ के गर्यो थाहा छैन तर बैठकमा कसैले राजीनामा मागेको छैन बैठकमा त्यसबारे कसैले केही कुरा गरेको छैन ।’
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए को’रोना भा’इरस २८ दिनसम्म जीवित रहने र’हस्य